७ करोडको पिच केही दिनमै यसरी उप्कियो, सिधाकुरा टिममाथी गुण्डागर्दीको प्रयास ! (भिडियोसहित) – Anurag Post
Home / अनुराग पोष्ट / ७ करोडको पिच केही दिनमै यसरी उप्कियो, सिधाकुरा टिममाथी गुण्डागर्दीको प्रयास ! (भिडियोसहित)
Anurag Post April 21, 2018	अनुराग पोष्ट, अन्तर्वार्ता, भिडियो, राजनीति, विज्ञान प्रविधि, व्यापार, स्वास्थ्य Leaveacomment 771 Views
गोरखा सडक मर्मतका लागि ७ करोड बजेट, तर काम भने यस्तो ! हेर्नुहोस भिडियो
यती मात्रै होइन अस्पतालमा लामो समय परीक्षणका लागि राख्नु पर्ने तथा वेवारीसे शब राख्ने रेफ्रिजेरेटर समेत बर्षौदेखि बिग्रीएको छ । अस्पतालको सामान्य खर्चमा मात्रै बन्न सक्ने रेफ्रिजेरेटर नबनाउँदा कुनै पनि २ दिन भन्दा बढी राख्न समस्या हुने गरेको छ ।
Previous ‘देशलाई मौका पाउँदा राणाहरुले लुटे, राजाहरुले लुटे, जनताको नाममा ताण्डव नाचेर लुटे, छाती ठोकेर लुटे’
Next ‘४/५ करोड चन्दा दिएको भरमा हाम्रो देशमा पुच्छरले माउ हल्लाइरहेका छन्’